Guyyaa WBO fi bara haarawaa 2016 ilaalchisuun dhaamsa Adda Bilisummaa Oromoo Oromia Shall be Free |
Guyyaa WBO fi bara haarawaa 2016 ilaalchisuun dhaamsa Adda Bilisummaa Oromoo
bilisummaa December 31, 2015	Comments Off on Guyyaa WBO fi bara haarawaa 2016 ilaalchisuun dhaamsa Adda Bilisummaa Oromoo
2015 xumurree, 2016 yeroo jalqamnu akkuma hunda keenyan hubatamu gaddafi gammachuu uf duuba deebine itti
yaadannu, kan itti deemnu bifa haarayaan simannu ykn saganteefannu taha. dhaabni keenya ABOn seenaa boonsa
tokkummaa qabsaaa’ota kan Ummanni keenya hawwaa turan xurree saaqne keessa isa tokko, hardhaas akkuma
kaleessaa qabsoo roga hundaan haqaafi abbaa biyyumma Oromoo dhugoomsuuf goonu Falmaa hadhawaa adda hin cinne
godhaa turre, ammaas itti jirrudha. Guyyaan WBO fi barri haarawaan mooraa qabsoo Oromoo fi ummata Oromoo biratti
ulfinaa guddaan kabajama. Guyyaa WBO lafee ilmaan Oromoo sirna garboonfattuu cabsuuf caccabde yaadachuu
duwwaa osoo hin taane, dhaamsa isaan nu qabsaawota hardhaaf dabarsan haaromfannee haqa Oromoo isaan kaleessa
irratti darban akka galmaan geenyu dirqama keenya wal yaadachiisuu fi irrattis wal jajjabeesuuf kabajama.
Guyyaa WBO bara 2016 seenaa qabsoo Oromoo keessatti waanti adda isa taasisu, dhalooti qubee qabsoo abbootiin
isaanii irratti wareegamanii asiin gahan, dhaamsaa fi hirbuu gootota wareegamanii golee Oromiyaa hunda keessatt,
kaabaa kibbaatti, bahaa lixaatti lubbuu itti wareegamanii tokkummaan mooraa Wayyaanee yeroo diigaa jiranitti
kabajama. Goototni ilmaan Oromoo abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo amma galma isaa gahutti qabsoon roga
hundaan finiinee kan itti fufu ta’uu isaa addunyaaf ifa taasisanii jiru. qabsoon roga hundaa yeroo ammaa Oromiyaa
keessatti finiinee jiru, humni kamuu dhaamsuu akka hin dandeenye dhugoomee jira. Wayyaaneen amma feete dhugaa fi
haqa ilmaan Oromoo humnaan sarbitee aangoorra jiraachuuf tattaaffii taasiftuus, dhalootni qubee haarsaa qaqqaalii
kaffaluun yeroo dhumaaf akka sirna bittuu Wayyaanee awwaalu dhugoomsee jira. kun ummata Oromoo fi qabsa’ota
isaaf injifannoo guddaa dha. Guyyaa eebbifamaa kana sababa taasifachuun ABOn dhaamsa aarmaan gadii qabsa’otaa fi
ummata Oromoof dhaama.
Diinni keenya kan nurra bubbulee fi bara baraan kan nu ajjeessaa, saamaa fi biyyoo biyya keenya irraa nubuqisaa
jiraateef tokkummaa dhabiinsa qabsoo keenyaa ti. Diinni keenya yeroo kamuu mooraan qabsoo fi ummati Oromoo akka
tokkummaan dhaabbatu hin barbaadu. Kana hubachuudhaan akkuma ilmaan Oromiyaa dhalooti qubee tokkummaan
dhaabbachuun mooraa diinaa raasaa jiran, ilmaan Oromiyaa martuu garaa garummaan xixiqqoon xaxamuu keessaa
baanee akka tokkummaan diina keenya falmannu waamicha taasisa.
Diinni keenya qabeenyuma keenyaan ilmaan Oromiyaa fi biyya Oromiyaa bitaa jira. qabeenya diinni keenya ittiin
nugarboomsaa jiru mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebisuun fardii dha. kanaaf dinagdee diinni keenya ittiin
nurratti goobe hongeessuudhaan akka tinnisa mooraa qabsoo Oromoof taasifamu waamicha godha.
Humna Oromiyaa fi ummati Oromoo qabnu ofirratti beekuu qabna. Wayyaaneen humna Oromoo fi Oromiyaan qabnu
akka ofirratti beeknu tasa hin barbaadu. Empaayera Itiyoophiyaa keessatti kennaa sabni kamuu hin qabne ummati
Oromoo fi Oromiyaan qabna. Humna namaa, dinagdee fi taa’umsa lafa keenyaa gara humna qabsootti jijjiiruu qabna.
Humna sadeen qabnu kana dhimma qabsoof yoo itti gargaaramne diinni keenya guyyaa tokkoof dachee keenya irra
buluu fi qubachuu hin danda’u. kanaaf humna qabnu gara fayidaa qabsootti jijjiruun fardii dha.
Walabummaa,bilisummaa fi abbaa biyyummaa Oromiyaa dhugoomsuuf jecha daandii injifannoo dhalooti qubee
saaqee jiru galii isaan gahuuf ilmaan Oromiyaa biyya alaa fi keessa jirtan, qabsa’onnii fi dhaabbileen siyaasaa mirgaa fi
bilisummaa Oromoof falmiirra jirtan, akka tokkummaa dhaabbannee waanjoo garbummaa ofirraa kaafnu waamcha
Dhumma irratti Addi Bilisummaa Oromoo akkuma kaleessa waadaa ummata Oromoof gale, hanqinootaa fi
dadhabbina qabsoo keessatti numudatan dhoksaa tokko malee ummata Oromoo wajjin tahuudhaan sirreeffachuuf qophii
dha. akkasumas qabsoo Oromoo daran tarsiimoo fi toftaa isaaf malu maddisiisuudhaan, ummata Oromoo, ijaaruu fi
hidhachiisuudhaan Oromoo humneessuuf qophii dha.
Sirni Wayyaanee ummata Oromoo ajjeessuudhaan, hidhuu fi qe’ee isaa irraa buqisuudhaan yakka irratti yoo yakka
dabalate malee, bifa kamiinuu qabsoo Oromoo akka galii isaa irraa dhaabuu hin dandeenye seenaa irraa barachuu qaba.
Wayyaaneen eega aangoo qabatee kaasee, yakkaa fi duguuggii sanyii ilmaan Oromiyaa irratti dalagaa jiru murtee
ummataa jalaa akka hin bane irra deebinee akeekkachiifna.
Carraadhuma kanaan lammii Oromoo taatanii yeroo dhihee jiru kanatti, badii kaleessaa irraa barachuu dadhabdanii,
ammas Wayyaanee wajjin tahuudhaan yakka seenaan dhiifama isiniif hingoone namootiin raawwachaa jirtan,(
keessumaa miseensi OPDO) akka ammas yakka lammii keessan irratti dalagaa jirtan irraa dhaabbattan ABOn isin
hubachiisa. Kana irra darbitanii garuu ammas saba keessan gantanii namootiin diina wajjin ilmaan Oromiyaa fi
Oromiyaa balleessuuf murteeffattan murtee seenaa jalaa akka hin bane hubadhaa.
Mudde 30, 2015-Amajjii 1, 2016
Previous The Ethiopian and Djibouti protests; people don’t live on bread and wine alone, they need sweet lies too
Next Fincila Diddaa Gabrummaa dhuma 2015